Basa redu | Zvikamu Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Kwemakore makumi maviri nemaviri ruzivo
Kuzvipira Uye Kunochengetedza
Basa revanhu, nzanga uye nharaunda
Nhasi "mubatanidzwa wemagariro mutoro" miromo inopisa kwazvo kutenderera pasirese. Kubva kuvambwa kwekambani mu2010, yeGroupeve basa revanhu uye nharaunda raitamba rakakosha basa, iro raigara richinetsekana zvikuru nemuvambi wekambani yedu.
Wese Mumwe Munhu Anoverengwa
Basa redu kuvashandi
Mabasa Akachengeteka / Hupenyu-hwakareba Kudzidza / Mhuri uye Basa / Hutano uye inokodzera kusvika pamudyandigere. KuGroupeve, tinoisa kukosha kwakakosha pavanhu. Vashandi vedu ndizvo zvinoita kuti tive kambani yakasimba, tinobata nerukudzo, nekuonga, uye nemoyo murefu. Yedu yakasarudzika vatengi kutarisisa uye kukura kwekambani yedu zvinongoitwa zvinogoneka pane izvi hwaro.
Basa redu kunharaunda
Zvigadziriso zvekuchengetedza magetsi / Zvishandiso Zvepaketi Ekutakura / Kufambisa Kwekufambisa
Kwatiri, chengetedza mamiriro ehupenyu hwepanyama sezvatinogona. Pano tinoda kupa mupiro kune zvakatipoteredza nezvigadzirwa zvedu uye mukugadzirwa kwavo, vanhu vazhinji uye vazhinji vachashandisa machira edu kunatsiridza simba rekushanda kwemahofisi nezvivakwa zvekugara.
Ngatidei zvisikwa; ngatifarirei kupenya kwezuva.
Earthquake Ruregerero / Ipa Unodzivirira Zvishandiso / Anobatsira Mabasa
Groupeve iri kugara ichitora pamwe basa rekushushikana kwenzanga. Isu tinotora chikamu mukubvisa hurombo munharaunda. Zvekusimudzira nzanga nekusimudzira kwebhizimusi pacharo, isu tinofanirwa kutarisisa zvakanyanya kuregedza hurombo uye zviri nani kutakura basa rekudzora hurombo.